Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.2.3 Mhedziso
Human computation inoita kuti uve chiuru tsvakurudzo vabatsiri.
Human computation mabasa nokubatanidza basa vakawanda vasiri nyanzvi kuti vagadzirise zvinetso nyore-basa-makuru dzinotambudza dzisina nyore kugadziriswa makombiyuta. Vanoshandisa vanorambana kushandisa-sangana nzira kuputsa dambudziko guru kupinda mijenya pamusoro nyore Micro-mabasa anogona kugadziriswa nevanhu vasina unyanzvi hwokukurukura. chizvarwa chechipiri hwevanhu computation gadziriro uyewo kushandisa muchina pakudzidza kuti kutsigira nesimba kwevanhu.
Munzanga tsvakurudzo, kwevanhu computation zvirongwa ingangowanikwa kushandiswa mumamiriro ezvinhu umo vatsvakurudzi vanoda patsanura, code, kana chitaridzi zvifananidzo, video, kana magwaro. classifications ava hausiriwo mugumo; ndivo yakatsvuka zvinhu yokutsvakurudza. Somuenzaniso, boka-Coding enyika manifestos yaigona kushandiswa kuongorora dzidziso pamusoro rinomutsa kuonekwa kune vaitamira.
Kuti uwane kuvaka mwoyo wako, Table 5.1 zvinowedzera mienzaniso sei kwevanhu computation rave kushandiswa mumagariro tsvakurudzo. tafura Izvi zvinoratidza kuti, kusiyana Galaxy Zoo, vakawanda zvimwe kwevanhu computation zvirongwa vanoshandisa Micro-basa mumisika basa (semuenzaniso, Amazon Mechanical Zimbabwe Turk). Ndichaedza kudzokera nyaya iyi mutori chido apo ini anopa mazano nezvokusika vakawanda kutsigirana pachako basa rako.
Table 5.1: Mienzaniso kwevanhu computation muzvirongwa munzanga tsvakurudzo.
Coding pati manifestos chinyorwa Micro-basa basa musika Benoit et al. (2015)
kusvina chiitiko mashoko kubva munhau nyaya pamusoro Occupy okutsutsumwa muna 200 mumaguta US chinyorwa Micro-basa basa musika Adams (2014)
kupatsanura pakati mumapepanhau chinyorwa Micro-basa basa musika Budak, Goel, and Rao (2016)
mokusvinwa chiitiko mashoko kubva diaries masoja muHondo Yenyika 1 chinyorwa vazvipiri Grayson (2016)
wanikidza kuchinja mepu mifananidzo Micro-basa basa musika Soeller et al. (2016)
Pakupedzisira, mienzaniso iyi chikamu zvinoratidza kuti computation kwevanhu kunogona kuva democratizing zvazvinoita nesayenzi. Yeuka, kuti Schawinski uye Lintott vaiva hanzvadzi vadzidzi pavakatanga Galaxy Zoo. Asati digitaalinen zera, chirongwa patsanura miriyoni renyeredzi kupatsanura angadai zvaida nguva yakawanda kudaro uye mari kuti zvaizova chete kwave anoshanda zvakanaka mari uye murwere mapurofesa. Ndicho asisiri echokwadi. Human computation mabasa nokubatanidza basa vakawanda vasiri nyanzvi kuti vagadzirise matambudziko nyore-basa-guru-pamwero mukuru. Zvadaro, Ndichakuratidza ndikuratidzei kuti vakawanda kutsigirana kungashandiswawo zvinetso zvinoda unyanzvi, unyanzvi kuti kunyange mutsvakurudzi pachake arege kuva.